Jizọs Anwụọ na Gọlgọta | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Jizọs Anwụọ na Gọlgọta
Ndị isi nchụàjà kpọọrọ Jizọs gaa n’ụlọ Paịlet. Paịlet ajụọ ha, sị: ‘Olee ihe ọjọọ nwoke a mere?’ Ha sịrị ya: ‘Ọ sịrị na ya bụ eze.’ Paịlet jụrụ Jizọs, sị: “Ị̀ bụ Eze ndị Juu?” Jizọs agwa ya, sị: “Alaeze m abụghị nke ụwa a.”
Paịlet zigaara ya Herọd ka ọ mara ma ò ga-achọpụta ihe Jizọs mere. Ọ bụ Herọd na-achị Galili. E nweghị ihe ọjọọ Herọd chọpụtara Jizọs mere, ya ezighachiri ya Paịlet. Paịlet gwaziri ìgwè mmadụ nọ ebe ahụ, sị: ‘Ma mụ ma Herọd enweghị ihe ọjọọ anyị hụrụ nwoke a mere. M ga-ahapụ ya.’ Ha tiri mkpu, sị: ‘Kpọgbuo ya! kpọgbuo ya!’ Ndị agha pịara ya ụtarị, gbụọ ya ọnụ mmiri, ma kụọ ya ihe. Ha kpuwere ya okpu e ji ogwu kpaa, jiri ya na-eme ihe ọchị, sị: ‘Ndeewo, Eze ndị Juu.’ Paịlet gwara ìgwè mmadụ ahụ ọzọ, sị: ‘O nweghị ihe ọjọọ m hụrụ nwoke a mere.’ Ma, ha tiri mkpu, sị: “Kpọgide ya n’osisi!” Paịlet kpọnyere ha Jizọs ka ha kpọgide ya n’osisi.
Ha kpọọrọ Jizọs gaa n’ebe a na-akpọ Gọlgọta, kpọgide ya n’osisi ma bulie osisi ahụ elu. Jizọs kpere ekpere, sị: ‘Nna, gbaghara ha, n’ihi na ha amaghị ihe ha na-eme.’ Ndị mmadụ ji ya mewe ihe ọchị, ma gwa ya, sị: ‘Ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, si n’osisi ịta ahụhụ a rịdata, ma zọpụta onwe gị.’
Otu n’ime ndị omekome a kpọgidere ha na Jizọs n’osisi gwara ya, sị: “Cheta m mgbe ị banyere n’alaeze gị.” Jizọs gwara ya, sị: “Mụ na gị ga-anọ na Paradaịs.” N’ehihie ụbọchị ahụ, ọchịchịrị gbara ebe niile ruo awa atọ. Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya guzo nso n’ebe ahụ a kpọgburu ya, ma Meri nne ya. Jizọs gwara Jọn ka o lekọta Meri ka nne ya.
N’ikpeazụ, Jizọs kwuru, sị: ‘Emechaala ya.’ Mgbe o kwuchara ihe a, ya ehulata isi ma kubie ume. Oké ala ọma jijiji malitere ime ozugbo. N’ụlọ nsọ, ákwà mgbochi nke kewara Ebe Nsọ na Ebe Kasị Nsọ dọwara abụọ malite n’elu ruo n’ala. Mgbe ihe ndị a na-eme, onyeisi ndị agha kwuru, sị: ‘N’eziokwu, nwoke a bụ Ọkpara Chineke.’
‘N’agbanyeghị ole nkwa Chineke dị, ha abụrụla ee site na ya.’ —2 Ndị Kọrịnt 1:20
Ajụjụ: Gịnị mere Paịlet ji kwere ka e gbuo Jizọs? Olee otú Jizọs si gosi na ya na-eche banyere ndị ọzọ karịa iche banyere onwe ya?
Matiu 27:11-14, 22-31, 38-56; Mak 15:2-5, 12-18, 25, 29-33, 37-39; Luk 23:1-25, 32-49; Jọn 18:28–19:30
Gịnị mere Paịlet ji ziga Jizọs na nke Herọd ka Herọd kpee ya ikpe? Ọ̀ bụ na Paịlet enweghị ikike ikpe Jizọs ikpe?
Paịlet chọpụtadịrị na Jizọs dị nwayọọ ma jide onwe ya.
Jizọs ekwee otu n’ime ndị omekome a kpọgidere ya na ya n’osisi nkwa.
Ọchịchịrị ahụ dị egwu gbaranụ n’ehihie, oké ala ọma jijiji ahụ merenụ, na ákwà mgbochi ahụ nke kewara abụọ n’ụlọ nsọ gosiri na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.
Baịbụl gosiri na ọnwụ Jizọs bara ezigbo uru. È nwere uru ọnwụ ya bara?